राखेप सदस्य सचिवमा सिलवालको आवेदन - Khelpati
राखेप सदस्य सचिवमा सिलवालको आवेदन
बुधवार, असार ३१, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को सदस्य सचिव पदका लागि निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले आवेदन दिएका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुधबार नयाँ कार्यकालका लागि सिलवालले आवेदन दिएका हुन् ।
नयाँ खेलकुद विकास ऐन असार १७ गतेबाट लागू भएसंगै राखेपको सदस्य सचिव पद रिक्त रहेको छ ।
सदस्य सचिवको रिक्त पदमा सिलवालले आवेदन हालेको छनोट प्रक्रियामा संलग्न एक अधिकारीले खेलपाटीलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सदस्य सचिवमा बुधबारसम्म ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमा भलिबलका पूर्व कप्तान अन्जु श्रेष्ठ, पूर्व भलिबल खेलाडी निलम बज्राचार्य समेत रहेका छन् ।
उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको अध्ययन गर्दै सिफारिस समितिले एक महिला सहित तीन जनाको नाम खेलकुद मन्त्री समक्ष प्रस्ताव गर्नेछ । सोही सिफारिस नामावलीलाई खेलकुद मन्त्रीले मन्त्रीपरिषदबाट पास गराउनेछन् ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ निष्कृय भएसंगै राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना सहित बोर्ड सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यवाहक सदस्य सचिवमा भक्त बहादुर ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो ।
यस्तै गत शुक्रबार मन्त्रालयले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
मन्त्रालयको सचिव रामप्रसाद थपलिया संयोजक रहेको समितिमा पूर्व बोर्ड सदस्य ईन्दिरा निरौला र पूर्व कर्मचारी रिम रानाभाटलाई विज्ञको रुपमा सदस्य नियुक्त गरिएको थियो ।
दरखास्त आह्वान गर्दै मन्त्रालयले योग्यता पुगेका उम्मेदवारले सात दिन भित्र निवेदन पेश गरिसक्नु पर्ने समेत बताएको थियो ।
समितिले आवेदन दिएका मध्येको अध्ययन गरि कम्तिमा एक महिला सहित सम्भावित तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । बैठकले निर्णय गरेका तीन जनाको नामलाई मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएसंगै पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव छनोट गर्न लागिएको हो । यसअघि खेलकुद मन्त्रीले ईच्छाएको ब्यक्तिलाई सिधै सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न मिल्ने ब्यवस्था रहेको थियो ।
पद ओगट्न आएको हैन– श्रेष्ठ
'भलिबलको कभर्डहल दुई वर्षभित्र'
राखेपको बोर्ड सदस्य बन्न दौडधुप
फरक मत राख्दा दुर्व्यवहार भयो - महासचिव भट्टाचार्य
युनियनका पदाधिकारी नेपाल तेक्वान्दो संघमा प्रवेश
राखेपको बोर्ड सदस्यमा १५ जनाको प्रतिक्षा !
राखेप उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई एन्फाको बधाई
सन्दीपले खेल्ने फ्रेन्चाइज लिगमा पारिश्रमिक समस्या !
सिटीको नयाँ जर्सी सार्वजनिक
राईलाई आर्थिक सहयोग